UNESCO Ndepụta Ihe Nketa Worldwa na-eto na Canada, Czechia, Germany, Republic of Korea, Myanmar na Poland
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » UNESCO Ndepụta Ihe Nketa Worldwa na-eto na Canada, Czechia, Germany, Republic of Korea, Myanmar na Poland
Akụkọ mkpakọrịta • Akụkọ Azerbaijan na -agbasa • Na-agbasa News Travel • omenala • Education • Akụkọ Ọchịchị • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Kọmitii Ihe Nketa Worldwa depụtara saịtị ọdịnala asaa na UNESCO Ndepụta Ihe Nketa onwa na Saturday. Saịtị etinyere di na Canada, Czechia, Germany, Republic of Korea, Myanmar na Poland. Ihe ederede ga-aga n'ihu echi, 7 July.
New saịtị, site iji nke e dere:
Distance Arochukwu -Bagan (Myanmar) - Bagan n’elu otu gbagọrọ agbagọ nke Osimiri Ayeyarwady na etiti ala dị larịị nke Myanmar, Bagan bụ mpaghara dị nsọ, na-egosi ụdị nka Buddha na ụdị ụlọ dị iche iche. Akụkụ asatọ nke saịtị ahụ gụnyere ọtụtụ ụlọ arụsị, stupas, ebe obibi ndị mọnk na ebe njem, yana ihe ochie, frescoes na sculptures. Ihe onwunwe ahụ na-agba akaebe dị egwu na elu nke mmepeanya Bagan (11th-13th ọtụtụ narị afọ OA), mgbe ebe a bụ isi obodo nke alaeze mpaghara. Otu ihe owuwu a nke nnukwu ihe owuwu na-egosiputa ike okpukpere chi nke alaeze Buddha mbu.
Seowon, Korea Neo-Confucian Mmụta (Republic of Korea) - Saịtị a, nke dị n’etiti na n’akụkụ ndịda nke Republic of Korea, mejupụtara itoolu seowon, nke na-anọchi anya ụdị agụmakwụkwọ Neo-Confucian nke usoro ndị eze Joseon (15th—19thọtụtụ narị afọ OA). Learningmụta, nsọpụrụ nke ndị ọkà mmụta na mmekọrịta na gburugburu ebe obibi bụ ọrụ ndị dị mkpa nke seowọn, gosipụtara na nhazi ha. N'ịbụ ndị dị n'akụkụ ugwu na isi iyi, ha nwere mmasị na ekele maka okike na ịzụlite uche na ahụ. Intendedlọ ndị a dị ka ụlọ paịlol e mere ka ọ dịrị ha mfe iji jikọọ ha na mbara ala. Na seowọn gosiputa usoro ihe omuma nke Neo-Confucianism nke si China ka emekorita ya na onodu Korea.
Writing-on-Stone / Áísínai'pi (Canada) - Saịtị a dị n’akụkụ ọnụ ụsọ ugwu ọkara ala kpọrọ nkụ Great Plains nke North America, n’ókè dị n’etiti Canada na United States of America. Ndagwurugwu Milk na-achịkwa ọdịdị ala nke ọdịbendị ọdịbendị a, nke a na-eji nchịkọta nke ogidi ma ọ bụ hoodoo - kọlụm nke okwute ndị a na-amịpụta na ụdị dị egwu. Ndị Blackfoot (Siksikáíítsitapi) ndị mmadụ dowere ihe osise na eserese n’elu aja aja nke Ndagwurugwu Milk, na-agba ama maka ozi sitere na Ihe Dị Nsọ. Ihe ochie bụ site na 1800 TOA ruo mmalite nke oge a kpọtụrụ ya. A na-ahụta ọdịdị ala a dị ka ihe dị nsọ nye ndị Blackfoot, na ọdịnala ha kemgbe ọtụtụ narị afọ ka a na-eme site na emume na ịkwanyere ebe ndị ahụ ugwu.
Mpaghara Erzgebirge / Krušnohoří Mining (Czechia / Germany) - Erzgebirge / Krušnohoří (Ugwu Ore) gbasara mpaghara dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Germany (Saxony) na ugwu ọdịda anyanwụ Czechia, nke nwere akụ nke ọtụtụ ọla eji eme ihe site na Middle Ages gaa n'ihu. Mpaghara ahụ ghọrọ isi iyi ọla ọcha kachasị mkpa na Europe site na 1460 ruo 1560 ma bụrụkwa ihe butere maka nrụpụta teknụzụ. A na-akọ akụkọ ihe mere eme, Tin bụ ọla nke abụọ a ga-amịpụta ma rụọ ọrụ na saịtị ahụ. Na njedebe nke 19th narị afọ, mpaghara ahụ ghọrọ nnukwu onye na-emepụta uranium zuru ụwa ọnụ. Ebe ọdịbendị nke Ore More dị afọ 800 ka ọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu, site na 12th na 20th narị afọ, na nsị, sistemụ njikwa mmiri ọsụ ụzọ, nhazi ihe ịnweta mmiri na saịtị agbaze, na obodo ndị na-egwupụta egwu.
Okirikiri ala maka ozuzu na ọzụzụ nke erenyịnya erenyịnya Ememme na Kladruby nad Labem (Czechia) - Ebe a dị na mpaghara Střední Polabí dị na mpaghara Elbe, saịtị ahụ nwere ala dị larịị, aja aja ma nwee ubi, ala ịta ahịhịa a gbara ogige, mpaghara ọhịa na ụlọ, emebere ha niile na ebumnobi nke ozuzu na ọzụzụ. kladruber ịnyịnya, ụdị ịnyịnya na-adọkpụ nke eji n'obí Habsburg eme emume. E guzobere ala ugbo nke alaeze na 1579 ma raara onwe ya nye ọrụ a kemgbe ahụ. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-azụ anụ ịnyịnya na Europe, nke mepụtara n'oge ịnyịnya rụrụ ọrụ dị mkpa na njem, ọrụ ugbo, nkwado ndị agha na nnọchiteanya ndị amaala.
Sistemụ Njikwa Mmiri nke Augsburg (Germany) - Usoro nchịkwa mmiri nke obodo Augsburg agbanweela na usoro ndị ọzọ site na 14th narị afọ ruo taa. Ọ na-agụnye netwọk nke ọwa mmiri, ụlọ elu mmiri na-esite na 15th ka 17th ọtụtụ narị afọ, nke nwere igwe mgbapụta, ụlọ ezumezu nke ndị na-anụ mmiri, usoro nke isi iyi atọ na ọdụ ụgbọ mmiri hydroelectric, nke na-aga n'ihu na-enye ike na-adịgide adịgide taa. Ngwuputa teknụzụ nke sistemụ njikwa mmiri a enyerela aka guzobe Augsburg dị ka onye ọsụ ụzọ na injinịịdrọlik.
Mpaghara Krzemionki Prehistoric na-apịa ebe ndị na-egwu egwu egwu - (Polish) - N'ịbụ nke dị na mpaghara ugwu Świętokrzyskie, Krzemionki bụ mkpokọta nke ebe anọ na-egwupụta akụ, na-amalite site na Neolithic na Bronze Age (ihe dịka 3900 ruo 1600 TOA), raara nye mmịpụta na nhazi nke okwute warawara, nke a na-ejikarị anyụike. -eme. Site na ebe a na-egwupụta akụ na ala, ebe a na-egwupụta ihe na ihe dị ka oghere 4,000 na olulu, saịtị ahụ nwere otu n'ime usoro kachasị dị omimi na usoro nhazi nke akọwapụtara ruo taa. Ebe ahụ na-enye ozi gbasara ndụ na ọrụ na mpaghara ndị gara aga ma na-agba akaebe na ọdịnala ọdịnala ochie. Ọ bụ ezigbo akaebe banyere mkpa ọ dị tupu oge ochie yana nke egwu egwu maka ịpụta ngwa ọrụ n'akụkọ ihe mere eme mmadụ.
The Oge nke 43 nke Kọmitii Ihe Nketa continueswa na-aga n'ihu ruo 10 July.